Talooyin & Xeelado |
Maxaan sameynaa kahor SMT PCB-yada inta lagu gudajiro howsha isku imaatinka PCB?
Maxaan sameynaa kahor SMT PCB-yada inta lagu gudajiro howsha isku imaatinka PCB? PCBFuture waxay leedahay warshad isku duuban oo smt ah, oo bixin karta adeegyada isku imaatinka SMT ee xirmooyinka ugu yar 0201 ka kooban. Waa taageerida siyaabo kala duwan oo loo farsameeyo sida isu imaatinka PCB iyo adeegyada PCEM OEM. Hadda, waan sii dari doonaa ...
Kiisaska dhibta naqshada guud ee loogu talagalay BGA ee PCB / PCBA
Waxaan inta badan la kulannaa iibinta BGA liidata ee geeddi-socodka geedi socodka shirkii PCB sababtoo ah naqshadaynta PCB aan habboonayn ee shaqada. Sidaa darteed, PCBFuture waxay soo koobi doontaa oo hordhac u noqon doontaa dhowr kiis oo dhibaato naqshadeyn guud ah waxaana rajeynayaa inay fikrado qiimo leh siin karto naqshadayaasha PCB! Waxaa jira badanaa t ...
Jaangooyada kuusha kuusha sabuuradda PCBA
Heerka la aqbali karo ee cabbirka kuusha caarada dusha sare ee guddiga PCBA. 1. dhexroorka kubbadda daasadda ah kama badna 0.13mm. Tirada kuul kuul dhexroorkiisu yahay 0.05mm-0.13mm inta u dhexeysa 600mm kama badna 5 (hal dhinac). 3. Tirada kuul kuleylka leh dhexrool ...
Habka wax soo saarka golaha PCB
PCBA waxaa loola jeedaa habka kor u qaadista, gelinta iyo dhajinta walxaha PCB. Nidaamka wax soo saarka ee PCBA wuxuu u baahan yahay inuu maro nidaamyo taxane ah si loo dhammeeyo wax soo saarka. Hadda, PCBFuture wuxuu soo bandhigi doonaa habab kala duwan oo wax soo saarka PCBA ah. Habka wax soo saarka PCBA waa loo qaybin karaa ...
Sidee loo doortaa soo saaraha golaha PCB?
Macaamiil badan ma aysan aqoon sida loo doorto markay raadinayaan warshadaha PCBA. Waxaa jira warshado aad u tiro badan oo isugu imaada PCB, oo dusha sare waxay umuuqdaan inay isku mid yihiin. Marka sideen ku heli karnaa warshad ku habboon PCBA? Aad ayey muhiim u tahay in la doorto warshad PCBA leh awood wax soo saar ku habboon ...
Maxaad u dooranaysaa PCBFuture ee ku saabsan isku duubnaanta PCB
1. Damaanad qaadka Xoogga Aqoon-isweydaarsiga SMT: waxaan soo dhoofsannay mashiinno meelayn ah iyo qalab kormeer badan oo indhaha ah, oo soo saari kara 4 milyan oo dhibic maalintii. Nidaam kasta waxaa lagu qalabeeyaa shaqaalaha QC si ay u ilaaliyaan tayada wax soo saarka. Khadka wax soo saarka DIP: Waxaa jira laba mashiin oo alxanka lagu dhejiyo. ...
Ayaa u bixin kara adeegga Golaha PCB ee looxyada kontaroolka warshadaha
PCBFuture waa soo saaraha PCBA OEM oo bixiya wax soo saarka PCB-ga xirfadlaha ah, soo iibsiga alaabta, PCBA hal-joojinta wax soo saarka degdegga ah iyo adeegyada kale ee tayada sare leh ee macaamiisha. Waxay ku siin kartaa adeegyada PCBA OEM ee looxyada xakamaynta warshadaha. Ganacsiga PCBA wuxuu ku lug leeyahay EMS ballaaran iyo OEM proce ...
Xagee ka dalban kartaa nooca PCBA nooc deg deg ah
PCBFuture waa soo saare wax soo saarka PCBA oo leh warshad guddi PCB u gaar ah iyo warshad yar yar oo SMT ah. Waxay ku siin kartaa macaamiisha adeegyo cadeyn dhakhso leh PCBA. Hadda, waxaan soo bandhigi doonaa PCBA awoodaha iyo habsocodyada degdegga ah. Awoodda cadeynta degdega ah ee PCBA: PCBFuture waxay leedahay 10 xirfadle componen ...
Sida loo hubiyo in qalabka elektirooniggu asal yahay
PCBFuture waa soo saare PCBA xirfadle ah oo bixin kara adeegyada PCBA OEM sida wax soo saarka PCB, soo iibinta qeybaha, soosaarida qashinka SMT, ka shaqeynta qalabka wax lagu shubo ee loo yaqaan 'DIP plug-in', baaritaanka isku imaatinka, iwm. Haddaba, aan soo bandhigno sida warshadaha PCBA ay u hubiyaan in qalabka la soo iibsaday ay yihiin asalka ah? Com ...
Waqtiga gaarsiinta PCBA wuxuu xiriir dhow la leeyahay howlaha kahor. Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay marka hore siiyaan waxyaabaha soo socda. Alaabta waxaa lagu geyn karaa 3 maalmood gudahood ka dib marka qalabka oo dhami dhammaado. Haddii ay jirto DIP ka baaraandegista, waxay qaadan doontaa 5-7 maalmood in la gaarsiiyo. Haddii aad leedahay amarro deg deg ah oo noqon kara ...
Sidee shirkaduhu u yareyn karaan kharashaadka isku imaatinka SMT
Waqtigan xaadirka ah, Shiinaha wuxuu noqday dhirta wax soo saarka adduunka oo dhan. Ku wajahida tartanka suuqa, sida si joogto ah loogu hagaajiyo tayada wax soo saarka, loo yareeyo qiimaha wax soo saarka, loo wanaajiyo waxtarka, loona gaabiyo waqtiyada hogaaminta waa qeyb weyn oo ka mid ah maareynta shirkadda wax soo saarkeeda. SMT waa Technolo shirka dusha ...
Muhiimadda weyn ee ilaalinta ESD ee adeegga isku-xidhka elektiroonigga ah
Waxaa jira waxyaabo elektaroonik ah oo badan oo sax ah oo ku saabsan looxyada isku xirka PCB, qaybo badanna waxay xasaasi u yihiin danab. Naxdin ka sarreysa danab la qiimeeyay ayaa dhaawici doonta qeybahan. Si kastaba ha noqotee, PCBA oo ay waxyeeleeyeen korantada ma guurtada ah way adag tahay in si tallaabo-tallaabo ah loo baaro inta lagu jiro tijaabada waxqabadka. ...